Android apk and games
ဘ၀ကို အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေသူ ၊ ကြိုစားချင်စိတ်ဖြစ်နေသူတွေအတွက် ဘ၀ခွန်အား ဒသနစကားလေးများ..
Unknown | 9:38 PM | ဒသနဆန်ဆန်စကားများ
9:38 PM ဒသနဆန်ဆန်စကားများ 1 comment
ကျွန်တော် က Mobile နည်းပညာ များကို ပဲMain အနေနဲ့ ဖော်ပြရေးထားပါတယ် .. Mobile ခေတ်ကိုး .. အခြားနည်းပညာဖြစ်လာရင် အခြားပေါ့နော့် .. ကဲကဲ ပြေစရာရှိတာပြောမယ်. အော်ဟုတ်ကဲ့ ကိုသီဟထ်ိုက်လားရှင့်.. ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ပါ ပြောပါ ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် အဲ့လို မျိူးလေးတွေမေးထားသူတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပြီနော် တစ်ခုတော့ပြောပါမယ် ကျွန်တော်ပြောပြလို့ ဆိုင်တွေကိုမသွားတော့ဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော့်အပြစ်မဟုတ်ပါ ကျွန်ာတေ့်ကို ဘာလုပ်လုပ်လဲလို့မေးရင် မပြောပါဗျာ ပြောချိန်တန်ရင် အမြဲပြောနေမှာပါ ကျွန်တော့် plan run ဖို့အချိန် ကျရင် ပြောပါ့မယ် ကျွန်တော့် ကို ဖုန်းဆက်မေးတဲ့သူများမှာ ဆိုင်သမားတွေပါသလို User တွေလဲပါတာပေါ့ အချိူ့ က ကျွန်တော့်အလုပ်ဘေးကလူတွေ အနီးနားလူတွေပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ် အဲဒါနဲ့ပြောရအုံးမယ် သူတို့ကို ကျွန်တော့်ကိုမေးပြီး ကျွန်တော့်အလုပ်ရှေ့မှာလာပြောနေရင်တော့ဘယ်ကောင်းမလဲပေါ့နော့်ဗျာ အဲ့လိုတော့မဖြစ်စေပါနဲ့ ကျွန်တော်ပွဲကြမ်းရင် သူများထက်ဆိုးတယ်နော် .. ဟဲဟဲ.. နောက်တာပါ ညီအကို Blogger များလည်းဒီနေရာကနေ အကြံလေးတစ်ခုပေးပါရစေ တစ်ခုတော့ညီအကိုတို့ Sharing လုပ်တာလုပ်တာပါပဲ ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းကို သေချာကိုင်တတ်ကတည်းက Sharing လုပ်တာပါပဲ ဘယ်သူမှ တိုက်တွန်းတာမဟုတ်သလို ဘယ်သူကိုမှလဲပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ်နဲ့မလုပ်ခဲ့ ပါ့ဘူး ဒါတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ပေါင်းဖက်ဘူးတဲ့နည်းပညာညီအကိုများသိပါတယ် ကျွန်တော့်ဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူး ဘာမှလည်းမတတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က Normal အတိုင်းပဲသွားနေပါတယ် High ဖြစ်သွားရင်လည်းသူများနဲ့မတူပါဘူး ရရာလက်နက်ကိုင်ပြီး မရရအောင် လုပ်တတ်တာအမှန်ပါပဲ ဒေါသမကြီးပါဘူး လုမိုက်မဟုတ်ပါဘူး လိုချင်တာကို ရအောင်လုပ်တတ်တဲ့လူမျိူးဆိုတာပြောတာပါ ok Main ပြောချင်တာက ကိုယ်က ဒီပညာကိုသင်ပေးမယ် ဆိုရင် ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အစ အဆုံးတတ်ပြီလား ပြီးတော့ Update ဖြစ်နေပြီးလား ဒါ က နည်းပညာညီအကိုများကို ချစ်လို့၊ခင်လို့ပြောတာပါ ဒါဆိုသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ် ဒါက တော်တော်များများ Blogger များဖြစ်နေကြတာပါ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတတ်ပါ သင်ယူနေဆဲပါ ကျွန်တော့်ကိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်လို့မေးခဲံရင်တော့.. "ယုံကလေးနှာစေး" တယ်လို့ထင်ပါလိမ့်မည် ။ ။
ကျွန်တော်ဟာ လူသားအားလုံးကို တတ်တတ်ကြွကြွနဲ့ ဘ၀ကို တိုးတတ်စေချင်တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော့်၏ မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာ ဆရာ့သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်)်ရေးသားထားသော ဒသန ဆန်ဆန်စကားလေးများအား ကူးယူပြီး မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ မောပန်းနေကြသော ဘ၀အမောများနှင့် အောင်မြင်လိုစိတ်များအား ကျွန်တော်ရဲ့ ယခုပို့စ်လေးနဲ့ အားပေးပါရစေ..
အာင်မြင်ချင်လိုက်တာ၊ ဖြစ်ချင်လိုက်တာ၊ တတ်ချင်လိုက်တာ၊ တော်ချင်လိုက်တာ ....။
ဒါပေမယ့် ပြောတဲ့သူတွေက ပြောပြီးအိပ်နေကြတယ်... ပြောပြီးမေ့နေကြတယ်၊ ပြောပြီး လေး ပင်နေကြတယ်...
ဒါကြောင့် တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေက ခဏခဏမပြောကြဘူး။
ပြောထားတာကို ထပြီးလုပ်ကိုင်အကောင်အထည်ဖော်နေလို့ အိပ်ဖို့တောင်မေ့နေတတ်ကြတယ်ဗျာ။ အိပ်ပြီးကုန်သွားမယ့်အချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလိုက်နိုင်ရင် မိတ်ဆွေ...
သိပ်မကြာခင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ ဝေးသေးတယ် ချက်ခြင်းအောင်မြင်ရေးလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီနော်......
လူတွေဟာ ကောင်းတဲ့ဆုလေးတွေ တောင်းပေးတာ သိပ်ခံချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်းပေးလိုက်တဲ့ဆုနဲ့ညီအောင်တော့ ပြင်ဆင်ယူဖို့ အားနည်းကြတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်က နံနက်ခင်းအတော်များများကို ဦးစွာတိုးတာများတော့ အိပ်နေရာက ထလာကြမယ့် မိတ်ဆွေတွေကို တကယ်အေးချမ်းတဲ့မေတ္တာနဲ့ တစ်ရက်တာအေးချမ်းဖို့ မေတ္တာပို့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လူတွေဟာ အဲ့ဒီ့မေတ္တာတွေများစွာကိုကျောပေးနေတတ်ကြတယ်။ မိမိရဲ့ မူလဂုဏ်သတ္တိ ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ကောင်းစွာအားဖြင့် တစ်ရက်တာဖြတ်သန်းဖို့တောင် ဆန္ဒမရှိကြသလိုပါပဲ။
ဘာသာဆိုတာ ကမ္ဘာဦးမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။ လူမျိုးဆိုတာလည်း ကမ္ဘာဦးမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။ အသက်ရှင်ရန် ရုန်းကန်ခြင်းသာ ရှိခဲ့တာပါ။ အဲ့ချိန်က လူသားတွေရဲ့အေးချမ်းမှု အခုမရှိတော့ပါဘူး။
ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာသာတွေ၊ လူမျိူးတွေ ကိုးကွယ်မှုခြားနားမှုတွေကြောင့် လူတွေတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ သာအောင်ဖန်တီးနေကြတယ်။ အနိုင်တွေပဲလိုချင်နေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာ အနိုင်ရလိုမှု၊ အတ္တကြီးဆိုးမှု၊ အသာရလိုမှု တွေအတွက် မိမိတို့ရဲ့ အခြေအနေကိုတောင် မေ့သွားလောက်အောင် တစ်နေ့တစ်နေ့ နေ့စဉ် ရုန်းကန်လာကြရတယ်။
ဖိဆီးမှုတွေ၊ တင်းကျပ်မှုတွေ၊ ဘောင်တွေနဲု့ တစ်ရက်ကို ထပ်ကျော်ဖြတ်မလားမိတ်ဆွေ။
သင်ဘာလူမျိုးလဲ ဘာကိုးကွယ်လဲ ဘာစိတ်ဓာတ်လဲ ဘယ်အဆင့်လဲ မေ့ထားလိုက်ပါ။
ဒီနေ့ တွေ့သမျှလူကို မေတ္တာထားကြည့်ပါ။ အလကားရတဲ့ စေတနာလေးထားကြည့်ပါ။
တစ်နေ့တာ ပြုံးမိတာတွေများပါစေ။ အပြစ်မြင်ဖို့ထက် ချစ်ရင်မြင်တဲ့မျက်လုံးလို နေကြည့်ပါလား။
လုပ်ငန်းခွင်ဖိဆီးမှုကအစ တစ်နေ့တာ အတွက်သင်ကျေနပ်စေမှာပါ။
ဒီတစ်ရက်အတွက် သင်နှင့်တွေ့ဆုံသူတိုင်း သင့်ထံမှ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိပါစေဗျာ။
လူသားအားလုံး အောင်မြင်မူသရဖူ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ..
ဆရာတစ်ယောက်မဟုတ်ပါနော် နည်းပညာလောကထဲစ၀င်လာကတည်းက ကျွန်တော် ဒီလိုမျိူး အစီအစဉ်လေးလုပ်ခဲ့တာပါ .. အားလုံးကကျွန်တော့်ဆရာတွေပါ အခုဒီပို့စ်ကိုကြည့်နေသူလည်းကျွန်တော့်ဆရာပါ :D
ကျွန်တော့်ထံသို့ မေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ Mobile နည်းပညာများ( မနက် ၉ မှ ည ၉ နာရီထိ) မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သိသလောက်ကို ဖြေပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ....(ကျန်တဲ့အချိန်တွေစက်ပိတ်ထားလို့ပါ)
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ကို Message နဲ့ပို့ပြီးမမေးဖို့ အထူးပြောလိုပါတယ် .ဖုန်းဆက်ပြီးသော်လည်းကောင်း မေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ (only voice call & Email )မအားတဲ့အချိန်ဖုန်းကိုင်မည်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်,အမှန်တစ်ကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် SMS က တစ်နေ့ကို အစောင်ရေမနေဘူးဗျ အဲ့ဒါကြောင့်ပါပိုက်ပိုက်ကလဲမနပ်မှန်ဘူးလေ :D ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပို့စ်လေးကြောင့်တစ်ခုခုရသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ရင် ဖုန်းဘေကဒ်လှမ်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ :P
ဘ၀ကို ဒသနဆန်ဆန် နေနိုင်ဖို့ သင်ဒါတွေဖတ်သင့်တယ် နော်...
Unknown | 8:47 PM | ဒသနဆန်ဆန်စကားများ
8:47 PM ဒသနဆန်ဆန်စကားများ 1 comment
ကျွန်တော်ဟာ လူသားအားလုံးကို တတ်တတ်ကြွကြွနဲ့ ဘ၀ကို တိုးတတ်စေချင်တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော့်၏ မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာ ဆရာ့သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်)်ရေးသားထားသော ဒသန
ဆန်ဆန်စကားလေးများအား ကူးယူပြီး မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ မောပန်းနေကြသော ဘ၀အမောများနှင့် အောင်မြင်လိုစိတ်များအား ကျွန်တော်ရဲ့ ယခုပို့စ်လေးနဲ့ အားပေးပါရစေ..
အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့တွေးပြီး လုပ်လိုက်သော်လည်း အဆိုးသာကြုံလာရင်လည်း အားမလျှော့သွားပါနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သာဆက်လုပ်ပါ။
မထင်မှတ်လောက်အောင် အဆိုးကြီးမဖြစ်တော့တာကို တွေ့ရပါမယ်။
တကယ်တော့ အဆိုးနဲ့အကောင်းဆိုတာ တကယ့်နီးနီးလေးပါ ကျောကပ်ရပ်ပါပဲလေ
မိမိဘ၀ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ မသိသေးသ၍ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အချို့ကတော့ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ သိနေသော်လည်း ဘာမှထမလုပ်သေးတော့ ဘာမှမဖြစ်လာသေးဘဲ ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ကို Message နဲ့ပို့ပြီးမမေးဖို့ အထူးပြောလိုပါတယ် .ဖုန်းဆက်ပြီးသော်လည်းကောင်း မေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ (only voice call &
Email )မအားတဲ့အချိန်ဖုန်းကိုင်မည်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်,အမှန်တစ်ကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် SMS က တစ်နေ့ကို အစောင်ရေမနေဘူးဗျ အဲ့ဒါကြောင့်ပါပိုက်ပိုက်ကလဲမနပ်မှန်ဘူးလေ
:D ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပို့စ်လေးကြောင့်တစ်ခုခုရသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ရင် ဖုန်းဘေကဒ်လှမ်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ :P
ကျွန်တော့်ကို နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာများမေးလျှင် "ယုံကလေးနှာစေး" တယ်လို့ထင်ပါလိမ့်မည် ။ ။
ဟုတ်ကဲ့.. "ကိုသီဟထိုက်လား? "လို့မေးမြန်းထားသူတွေအတွက်..အဲ.. ဒါပေမဲ့ အားလုံးလဲဖတ်လို့ရပါတယ်..:D
Unknown | 9:49 PM | Mobile Tutorial
9:49 PM Mobile Tutorial No comments
ယခုပို့စ် ကျွန်တော့် ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးမြန်းထားသော သူများအတွက် သီးသန့်ပေါ့နော်.. ဒါပေမဲ့ မသိသောသူတွေဖတ်နိုင်ပါတယ်.အားလုံးကိုစုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါပြီ .. ဖုန်းဆက်မေးမြန်းထားသောသူများ ထဲမှ မေ့ပြီး မတင်ပေးဖြစ်ခဲ့ရင်ပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်..ပြီးတော့ မအားတဲ့အခါ ၊လိုင်းမကောင်းလို့ဆိုရင် ပို့စ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတင်ပေးဖြစ်မယ်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးပါ..ယခုဒီပို့စ်ထဲမှ စာသား၊ပို့များသည် ဒီဆိုဒ်မှာရှိချင်ရှိပါလိမ့်မည် ၊ ဒီဆိုဒ်မှာရေးသော ဘလော့ခ်ဂါတွေရေးရင်ရေးခဲ့ဖူးမယ် ၊ ဒါပေမဲ့နားလည်ပေးပါ ၊ယခုမှစတင် Media Device များကိုသုံးမဲ့ သူများအတွက် သူတို့မရှာဖွေတတ်လို့ တောင်းဆိုလို့တင်ပေးရတာ ဆရာ၊ညီအကိုများနားလည်ပေးကြပါနော်..် အချိူ့သောကိစွ များဟာ ကျွန်တော့် ပါးစပ်နဲ့ဖြေလို့ မရတဲ့ ပြသနာများကိုတော့ ပို့စ်တင်ပေးနေပါတယ် .. မိမိတို့ တင်လိုသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ များကိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်ပေါ့နော် ..ဒါပေမဲ့ Myanmar လို့တော့ Earror တွေကို မပို့ပါနဲ့ English လိုပဲပို့ကြပါဗျာ.. ကျွန်တော့်ဖုန်းက Keypad မို့လို့ပါ.. :D
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ Fail ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မဖတ်ဘူး အခု ဖုန်းကိုင်ဘူးမှပဲ Message sent fail ဖြစ်နေပါကောလား???(messanger center ချိန်နည်း)
တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ Messaging app ရဲ့ Settings မှာ SMS center number ထည့်စရာနေရာမပါတာ၊ ထည့်ရင် ပြသနာတက်တာတွေ ရှိပါတယ်။
အဲလိုဖုန်းတွေမှာ ဒီနည်းကို သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ရမရကို ပထမဆုံး Dialer မှာ *#*#4636#*#* လို့ ရိုက်ကြည့်ပါ။ ဘာမှ တက်မလာရင် ဒီနည်းနဲ့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Menu တစ်ခုတက်လာခဲ့ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လုပ်ကြည့်ပါ။
1. Dialer (ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာ) မှာ *#*#4636#*#* လို့ရိုက်ပါ။
2. ပေါ်လာတဲ့ Menu မှာ Phone Information ကိုရွေးပါ။
3. အောက်နားမှာ ခလုတ်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ "Turn off IMS Registration" ကိုတွေ့ရင် အဲဒါကို နှိပ်ပါ။ "Turn on IMS Registration" လို့ပြောင်းသွားရင် ရပါပြီ။ နဂိုထဲက ပြောင်းပြီးသားဆိုရင် ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး။
4. အောက်က SMSC ဆိုတဲ့ ဘေးက စာရိုက်ရမယ့်နေရာမှာ
- Center number +9595930003 ကိုသုံးချင်ရင် 0691595939003011 လို့ရိုက်ထည့်ပါ။
- Center number +9595930014 ကိုသုံးချင်ရင် 0691595939004111 လို့ရိုက်ထည့်ပါ။
ဂဏန်းကို သေချာပြန်စစ်ပြီးရင် Update ကိုနှိပ်ပါ။
5. SMS center number အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။ Message စမ်းပို့ကြည့်ပါ။
Message box ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ > Settings ကိုရှာပါ (အောက်နားမှာရှိတတ်ပါတယ်)> text Message ကိုသွားပါ (တချို့ဖုန်းတွေမှာ text message သွားစရာမလိုပါ) message center ကိုတွေ့ရင် အပေါ်မှာ MPT လို့ရိုက်ပြီး အောက် မှာ +09595930003ရိုက်ပါ ( တချို့ဖုန်းတွေမှာ message center နေရာမှာ service center ဆိုပြီးပါတယ်) +09595930003 ကိုသာရိုက်လိုက်ယုံပါပဲ။ ပြီးရင် Save လုပ်ပြီး message ပို့ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်.........
ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက်မြန်မာလိုလေးရေးချင်တယ် မမရွှေမူံ..:P
samaung galaxy ဖုန်းတွေကို root စရာမလိုပဲ
ကဲစမယ်ဗျာ settings ကိုသွားမယ် ပြီးရင်
ပြီးရင် screen display နှိပ်ပါ
ပြီးရင် font style ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးရင် zawgyi-one ttf ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ok နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် restartnow ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုစက် restart ကျသွားပါလိပ်မယ်စက်ပြန်ဖွင့်လာတဲ့အခါမြန်မာ
ပြီးရင် settings ကိုနှိပ်ပြီးအောက်ကပုံပြထားသလို locale & text ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးရင် frozenkayboard ကိုအမှတ်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုမြန်မာစာရေးလို့ရသွားပါပြီး စာရိုက်တဲ့အကွက်မှာခဏဖိထားပြီး edit taxt
အောက်မှာ input method ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးရင် Frozenkeyboard ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ပထမဆုံးroot မည့်​ဖုန်းကို charger ​ပေးထားပါ
apkကိုinstall လုပ်​ပြီး touch တစ်​ချက်​နှိပ်​ရင်​
သူအလိုလို apk ကroot ​ပေးမှာဖြစ်​ပါတယ်​။
root ​အောင်​မြင်​သွားရင်​ ဖုးက restart ကျသွားမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ အခြားနည်းလမ်းများလဲရှိနိုင်​ပါတယ်​။
Download Pro Myanmar
ဦးဦး:pမီးဖုန်း Patten Lock ကျသွားရင် မီးဖြင့် အဲမှားလို့ Patten Unlock Toofor pc နဲ့ဖြေပေးလိုက်ပါ.. :D
Android ဖုန်းတွေ pattern, pin, password ကျသွားရင် command နဲ့ ရိုက်ဖြုတ်နေရလို့
အဆင်ပြေအောင် one click လေးလုပ်မယ်ကြံတော့ database file တွေကို
လိုက်ပြီး ကြည့်ရတာ မူးနေတာပဲ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးကလဲမတူ တော်တော်တိုင်ပတ်သွားတယ်
Ko Ning Lynn ရဲ့ SH နှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တော့ မှ ရှာစရာမလိုတော့ဘူးဗျာ အဲဒါနဲ့ အရံသင့် ပဲယူသုံး
Ko Ning Lynn ကို Credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျား။ ။
ဒီ tool လေးက ခက်ခက်ခဲခဲ သုံးစရာတော့ ဘာမှမရှိပါဘူး ဖုန်းက root access ရှိရမယ် Debugging on
ထားရမယ်။ ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိပ်ပြီး Check Device နှိပ်လိုက်ရင် ရပြီ ကိုယ့်ဖုန်းက root access ရှိ
ရဲ့သားနဲ့ (Yes) or (No) မေးလာရင် Yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Delete pattern ကိုနှိပ်လိုက်လို့ 100% ရောက်ပြီး Thanks you ပေါ်လာရင် reboot ကျတဲ့
မှတ်ချက် : အခု တင်ပေးတဲ့ ဒေါင်းလင့်ကို မဒေါင်းတတ်ရင် ဒီလင့် မှာ ဒေါင်း နည်းကြည့်လိုက်ပါ။ Upload ဆိုဒ်အသစ်မှာ စမ်းတင်ထားပါတယ်။
>>>>>>Download Pattern Unlock tool<<<<<<
သင့်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာ Pin, Patten & Password lock တွေကို ကွန်ပျူတာမလို၊ USB Debugging မလို၊ CWM Recovery ရှိရုံနဲ့ Unlock လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Flashable zip လေးပါ ... Pin, Patten & Password တွေကို ဖျက်နိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ Tools တွေကလည်း အများကြီးရှိပါတယ် ... တစ်ချို့လည်း USB Debugging ကို On ပေးဖို့လိုသလို - USB Debugging မ On ထားလည်း ဖြုတ်နိုင်တဲ့ Tools တွေရှိပါတယ် ...
အခုကျွန်တော်ပေးမယ့် Flashable zip လေးကတော့ ကွန်ပျူတာရှိရန် မလို၊ USB Debugging On ထားရန်မလိုပါ ... CWM Recovery ရှိရုံနဲ့ Lock တွေကို ဖြုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျ ... Root ပီးသားဖုန်းမှန်သမျှ CWM Recovery သွင်းထားမယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျ ...
အခုပေးတဲ့ Flashable zip ဖိုင်ကို SD Card ထဲမှာထည့်ပါ ... ပီရင် ဖုန်းကို သက်ဆိုင်ရာ key တွေကိုနှိပ်ပီ Recovery ကိုဝင်ပါ ... ပီရင် install zip from sdcard >> choose zip from sdcard ကနေပီ PIN-Patten-Passwordsunlock By ZawMyooo.zip လေးကို Install ပေးလိုက်ရင် Lock ဖြစ်နေတဲ့ ဖုန်းတွေ အားလုံးပြုတ်ပီဗျ ...
- Pin နဲ့ Password ဆိုရင် ဖုန်းတက်လာတာနဲ့ Slide ဖြစ်သွားပါမယ် ...
- Patten ဆိုရင် ဖုန်းတက်လာရင် Patten ဆွဲခိုင်းပါမယ် ... ကြိုက်သလိုသာဆွဲပီ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဗျ ....
==>> PIN-Patten-Passwordsunlock By ZawMyooo.zip <<==
ဟာViber က Code ရတာတောင် မပွင့်ဘူးလားကွာစိတ်တောင်ညစ်လာပြီ (စိတ်ညစ်နေသောဘော်ဘော်တွေပါ)
ဖုန်း တစ် လုံး ထဲ မှာ တင် Viber Account နှစ် ခု သုံး နိုင် တဲ့ Application လေး ဖြစ် ပါ တယ်။ 2Lines for Viber ကို အ သုံး ပြု
ဖို့ အ တွက် မိမိ တို့ ရဲ့ ဖုန်း က Root Access ဖြစ် ဖို့ တော့ လို အပ် ပါ တယ်။ အသုံး ပြု ရတာ လည်း လွယ် ကူ ပါ တယ်။ Error
မရှိ ပါဘူး ကျွန်တော် စမ်း ကလိ ကြည့် လို့ အဆင် ပြေ မှ တင် ပေး လိုက် တာ ပါ။
နောက် ထပ် Account တစ် ခု ထပ် ဖွင့် ချင် တယ် ဆို ရင် တော့ အောက် က ပုံ မှာ မြင် ရ တဲ့ အ တိုင်း Add new line for viber
ကို နှိပ် ပြီး Viber ဖွင့် နေ ကြ ပုံစံ အ တိုင်း ထပ် ဖွင့် ရုံ ပါ ပဲ။ အ သုံး ပြု ရင် လည်း Viber ကို နှိပ် ပြီး အ သုံး ပြု ရ မှာ ပါ။ သုံး နေ
ရင်း အ ခြား Account ပြောင်း ပြီး သုံး ချင် တယ် ဆို ရင် တော့ 2Line For Viber ကို နှိပ် ပြီး ပြောင်း သုံး ချင် တဲ့ ဖုန်း နံ ပါတ် ကို
နှိပ် ပြီး သုံး ရမှာ ပါ။
Android OS 2.2 နှင့် အ ထက် ဖုန်း များ မှာ အ သုံး ပြု နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ဗျာ။
Use several Viber accounts in your mobile phone!
★★★★★ "It was about time to be able to have2different Viber accounts in my cell phone"
Do you have several mobile phone numbers? Do you own two Viber accounts and carry them on different cell phones?
2Lines for Viber allows you to use Viber with different mobile phone numbers on the same device!
2Lines for Viber will save every Line account info you have and restore it automatically when you switch from one to another without needing registration or waiting for SMSs every time.
USE ON YOUR OWN RESPONSIBILITY!! Chorrasoft won't take responsibility for any lost or corrupt data on your Viber app.
အင်တာနက်ဖွင့်သုံးနေစဉ် Viber ကို offline လုပ်ထားနိုင်သော Viber Switch for Android
Viber Switch.apk သည် Android ဖုန်း Viber user များအတွက် အင်တာနက် ဖွင့်သုံးနေစဉ် မိမိ viber ကို အလွယ်တကူ Online/Offline စိတ်ကြိုက်ထား၍ အသုံးပြုနိုင်သော app ဖြစ်သည်။
ဒီ apk ကို သုံးရန် သင့်ဖုန်းတွင် Viber ကို install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမည်။ app ကို ဖွင့်၍ Offline ကို ကိုနှိပ်လိုက်ပါက သင့် viber သည် Offline ဖြစ်သွားပြီး စာ၊ ပုံ နှင့် Video ဖိုင်များ ၀င်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက် ဖွင့်ထားသော်လည်း တစ်ဘက်လူမှ သင့် viber ကို ကြည့်လျှင် Offline ဖြစ်နေမည်။ တစ်ဘက်မှ စာပို့သော်လည်း သင့်ထံသို့ စာမ၀င်နိုင်တော့ပါ၊ Delivered မပြတော့ပါ။
app ကိုဖွင့်၍ Online ခလုတ်ကို ပြန်နှိပ်မှသာ သင့် viber ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်အလုပ်လုပ်ပါမည်။
သတိပြုရန်မှာ Offline လုပ်ထားစဉ် viber ကို ဖွင့်လိုက်မိပါက Online ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီး တစ်ဘက်မှ ပို့ထားသောစာများ ချက်ချင်း ၀င်လာလိမ့်မည်။
အင်တာနက်သုံးပြီး Viber မှာ ပုန်း ချင်သူအများ အတွက် တွက်ခြေကိုက်ပါသည်။
Thanks to Viber, Original Owner
အသုံးပြုလိုပါက အောင်က လင့် မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Viber Switch for Android အားရယူရန်
Viber နဲ့ဖုန်းကို free call ဆက်ဖို့အတွက် ဖုန်းမှ internet connection (သို့)wifi internet connection တစ်ခုခုမိနေဖ်ို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေဆီကို free ဆက်လို့ရပါတယ်
နှစ်ဖက်စလုံးမှာ internet မိနေဖို့နဲ့ viber install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။အောက်မှာ download ပေးထား
ပါတယ်အရင် Download ဆွဲလိုက်ပါ၊ပီးရင် ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာချိန်ဆက်ပီး viber.apk လေးကို ဖုန်းရဲ့ sd card
ထဲ့ကို copy ကူးထဲ့ပါ၊ဖုန်းမှာရှိတဲ့ file manager ထဲ့ကိုဝင်ပီး sdCard ထဲ့ဝင်ပီးကိုယ်ထဲ့လိုက်တဲ့ viber.apk
ကိုနိုပ်ပီး install လုပ်လိုက်ပါ။ install လုပ်ပြီးပါက viber ကိုဖွင့်ပါအောက်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းနိုင်ငံရွေးပါ
အောက်က Box မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲ့ပါ၊ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်က (ဥပမာ)09450012345 ဆိုပါစို့ သုညဖြုတ်ပီး
9450012345 ဆိုပီးထဲ့ပါ ပီးရင် Continue နိုပ်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို Viber မှ Activation code တစ်ခု Message ပို့ပါလ်ိမ့်မယ်။ အဲ code ကို အောက်ကပုံ
အတိုင်း Box မှာထည့်ပါ။ ပြီးရင် Enter Viber ကိုနှိပ်ပါ။ Activation Code Message အနေနဲ့မိမိဖုန်းကို မရာက်လာပါက click here ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Bowser ကျလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ပါတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲမှာ Get Code ဆိုတာလေးကိုနိုပ်လိုက်ပါနိုပ်ပြီးတာနဲ့
ခဏနေရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို Call ၀င်လာပါမယ်ကိုင်ပီးသေချာနားထောင်ပေးပါယောကျာင်္းလေးအသံ Activation
Code နံပါတ်ပြောပါမယ်၊စာရွက်/ခဲတန် တစ်ခုခုနဲ့လိုက်မှတ်ပီးပုံမှာပြထားတဲ့ Box မှာထဲ့ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် Enter
ok ပီထင်ပါတယ် မိတ်ဆွေအချင်းချင်းစကားပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကို Viber ထဲမှာ Invite လုပ်ပေး
ပီးစခေါ်လို့ရပါပီ ကိုယ့်ဖုံန်းရဲ့ contect ထဲ့မှာ save ထားတယ်ဆိုရင်တန်းပေါ်နေတာလဲကြုံဖူးပါတယ် Call ရော
မှတ်ချက်။ ။ Viber ကDisconnectedဖြစ်တာ၊ Viber မက်ဆေ့ပို့တာ မရတာပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ဖြစ်နေတာက ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာနိုင်ငံကြီးက မြန်နူန်းမြင့်လိုင်းကြောင့်ပဲပေါ့ဗျာ..ဒ အဲဒါနဲ့မေ့တော့မလို့ထပ်ပြောလိုကအုံးမယ်..Viber မှာ Contact မပေါ်ဘူးလား အင်းအဲ့ဒါ Viber3.0 နဲ့ရပါတယ်.. >>>>>>>>>> Facebook ကို တစ်ဉ်ီးတည်းပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပစ်မယ်.. (ဟီးဟီး onlyme ထားတာ) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
၁။ ။Gmail ဖွင့်နည်း။ (ဖုန်း Setting မှတဆင့်)
၂။ ။Facebook အကောက်ဖွင့်နည်း။ (ဖုန်းနံပါတ်မတောင်း ဘာဆော့ဝဲလ်မှမလို) http://pc.cd/D9b
၃။ ။ကိုယ့်သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းဘဲ Add friend ရအောင်ပိတ်နည်း။ (တချို့အကောက်တွေ တွေ့ဖူးမျှာပါ Message တကွက်ဘဲပေါ်တာမျိုးပေါ့) http://pc.cd/Teb
၄။ ။Facebook အကောက်ကို ဖျက်သိမ်းနည်း သို့မဟုတ် တခဏ (၁၄) ရက်ခဏပိတ်ထားနည်း။ http://pc.cd/web
၅။ ။Facebook ကိုယ့်အကောက်ထဲက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို ကိုယ်တယောက်ဘဲမြင်အောင် (Only me) ဖွက်ထားနည်း။ http://pc.cd/Bnb
၆။ ။ကိုယ် Like ထားတဲ့ Page နဲ့အခြား Like နဲ့ဆိုင်တာတွေကို ကိုယ်တယောက်ထဲတွေ့အောင် (Only me) ဖွက်ထားနည်း။ http://pc.cd/jxF
၇။ ။သူများလာ Tag တာကို စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် Tag ပိတ်နည်း။ Tag တာကို အသေပိတ်လို့တော့ မရပါဘူး ဖတ်ကြည့်ပါ။ http://pc.cd/ieb
၈။ ။တချို့လူတွေ ဖုန်းနံပါတ်ကြီး ပေါ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ကိုယ်တယောက်ထဲမြင်အောင် (Only me) ဖွက်ထားနည်း။ http://pc.cd/f9b
၉။ ။ကျွန်တော်သိသလောက် Facebook အကောက်လော့ကျရခြင်း ပြသနာ http://pc.cd/Qeb
အဲမေးထားသူတွေအဲ့မှာဒေါင်းဖတ်နော်.. >>>>>>>>>>>>>>>> အဲအဲ ဒါနဲ့ Flashtool သမားတွေနောက်နေ့မှပေါ့ဗျာ ယခုတော့ ဒီညဒီပို့စ်နဲ့သာတော်ကြအုံးစို့ တိန်.. ငိန်ငိန် >>>>>>>>>
စီစဉ်တင်ဆက်သူ = သီဟထိုက်
Email )မအားတဲ့အချိန်ဖုန်းကိုင်မည်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်,အမှန်တစ်ကယ်ပြောရရင် ပြန်ပို့ဖို့ပိုက်ပိုက်မရှိလို့ပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ရင် ဖုန်းဘေကဒ်လှမ်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ :P
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ကျွန်တော်မအားလပ်လို့ပို့စ်တွေနေ့စဉ်မတင်ခဲ့တာနားလည်ပေးပါနော်.. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ကဲမိတ်ဆွေ.. သင်တို့ကော ဒါတွေသိပြီးပြီလား ..For ရမ်းစတား.. :
Unknown | 9:47 PM | Mobile Tutorial
9:47 PM Mobile Tutorial No comments
Mark Zuckerberg ကဘာဖြစ်လို့ အဝတ် မလဲတာလဲ။
Facebookရဲ့CEOဖြစ်သူ Mark Zuckerberg ကဘာဖြစ်လို့ အဝတ်မလဲတာလဲ။
Facebookသုံးသူတွေရဲ့မေးခွန်းတွေကို Mark Zuckerberg ကပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးကို ၆ရက်နေ့က Facebook ရုံးချုပ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
မေးခွန်း။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီအဝတ်တွေ အင်္ကျီတွေကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲဝတ်နေတာလဲလို့ မေးလာတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ သူကဒီလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အဖြေ။ အင်္ကျီဘာဝတ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားနေရတာ အချိန်ကုန်ပြီး ပင်ပန်းလို့ပါ။
သူက အမြဲတမ်း အညိုရောင် T Shirt နဲ့ အမဲရောင် Trainer ကိုပဲဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အရင်ကတည်းက T Shirt တစ်ရောင်တည်းကိုပဲ အထည် ၂၀ လောက်ရှိတယ်တဲ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကို သူကထပ်ပြီးပြောပြန်ပါတယ်။ သူဟာ Facebook မှာ အရေးကြီးတဲ့ရာထူးကိုယူထားသူဖြစ်တာကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် ၂၄ နာရီ Facebook
အကြောင်းကို စဉ်းစားနေချင်တာကြောင့် မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အချိန်ကို အကုန်မခံချင်ဘူးတဲ့။
တစ်နေ့မှာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမဲ့ကိစ္စတွေကို တတ်နိုင်သလောက် နည်းအောင်လုပ်ချင်လို့ ဒီလိုလုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။
ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်း ဒီလိုပဲလို့ဆိုပါတယ်။ သူတစ်ယောက်တည်း ဒီနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးနေတာမဟုတ်ပဲ သမ္မတကြီး အိုဘာမာ ဟာလည်း ဒီနည်းကို ကျင့်သုံးနေပါတယ်။
နောက်ပြီး Facebook ရုပ်ရှင်ကားမှာ ပါတဲ့အကြောင်းတွေက တကယ်လားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်း တချို့ဟာလေးတွေက မမှန်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။
ရုပ်ရှင်တစ်ကားအနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားသွားပါတယ်။
ယခင်က ယောက်ျားက ငွေရှာပြီး မိန်းမက အိမ်ထောင် ထိန်းသိမ်းရသည့် ခေတ်တစ်ခေတ် ရှိခဲ့ပါသည်။
ယင်းကာလတွင် အင်တာ နက်မရှိခဲ့သည်ကတော့ အသေအ ချာပင်။ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်ရှားပါးပြီး ရှိသောအလုပ် များကလည်း အကူ၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ကလေးထိန်း၊ ချက်ပြုတ်သူ၊ လူ နာစောင့်စသည့် အလုပ်များသာ ရှိခဲ့သည်။ ကျန်အလုပ်များက ကာယအင်အားကို အသုံးချရ သည့် အလုပ်ကြမ်းများ (သို့တည်း မဟုတ်) ယောက်ျား ဟိတ်ဟန်ပြ ပြီး လုပ်ရသည့် အလုပ်များဖြစ်ခဲ့ သည်။
ပညာသင်ယူရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအတွက် အခွင့်အ လမ်း နည်းပါးခဲ့သည်။ ယင်း ခေတ်အခါက ရိုးရာထုံးစံလို ဖြစ် နေသည့် ဓလေ့များကို ယနေ့အ ချိန်အထိ လက်ခံကျင့်သုံးနေသည် များ ရှိနေသေး သည်ကို တွေ့ရ သည်။
တိုးတက်မှု နည်းပါးသော နေရာဒေသများတွင် အထူးသ ဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ရှေးရိုးဓလေ့ကို ဆက်လက် လက်ခံကျင့်သုံးနေကြ သည်ဟု လူမှုရေးပညာရှင်များက ထောက်ပြသည်။ တိုးတက်သော နိုင်ငံတွင် အပြောင်းအလဲများစွာ ရှိလာသည်။ ယင်းသို့ ပြောင်းလဲ လာသည့် ဖြစ်စဉ်သည်လည်း အင်တာနက်ခေတ် မတိုင်မီက အ တော်ကြာအောင် အချိန်ယူခဲ့ရ သော်လည်း အိုင်တီခေတ်တွင် တော့ မြန်ဆန်လာသည်။
အဓိက အကြောင်းအရာ တစ်ခုမှာ အိုင်တီကို ကျား၊ မ မရွေးသင်ယူလေ့လာနိုင်ပြီး အ သုံးပြုနိုင်သော ကြောင့် အခွင့်အရေးတန်းတူ ရရှိလာကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မှန်ပါသည်။ မည်သည့် ခေတ်နှင့်မျှ မတူဘဲ ကျား၊ မ မရွေး မည်သူမဆို လုပ်ကိုင်နိုင် သည့် အလုပ်မျိုးကို အိုင်တီက ဖန်တီးပေးသည်။ ယခင်က အ လေးအပင်များ မ,ရသည့် အလုပ် မျိုး၊ ကိုယ်ကာယအင်အား သုံး မှသာ အလုပ်တွင်သည့် အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံမျိုးတွင်သာ အလုပ်များ ရှိခဲ့ရာက ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ ဖုန်းတစ်လုံးဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်နိုင် သည့် အလုပ်များ၊ ကာယစိုက် ထုတ်ရန် မလိုသော စက်မောင်း နှင်သည့် အလုပ်များစသည်တို့က နေရာဝင်ယူလာကြသည်။
အဆင့်မြင့် ပညာသင်ယူရေးတွင် ကျား၊ မ အရေအတွက် တန်းတူဖြစ်လာသလို ယခင်က ယောက်ျား များသာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ကုန်ကားကြီးများ မောင်း နှင်ခြင်း၊ အငှားကားမောင်းနှင် ခြင်း၊ ရထား မောင်းနှင်ခြင်း စ သည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ၀င်ရောက်လုပ် ကိုင်သော မိန်းမအ ရေအတွက် တိုးလာနေသည်။
သို့ရာတွင် ယင်းပြောင်းလဲမှု အများစုမှာ တိုးတက်သော နိုင်ငံ များတွင်ဖြစ်သည်။ တိုးတက်သည် ဆိုရာတွင်လည်း စက်မှုပိုင်း တိုးတက်သည်သာမက လူတို့၏ အသိအမြင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်၏ အတွေးအခေါ် အပါအ၀င် အ ထွေထွေတိုးတက်မှုကို ဆိုလို သည်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး စက်မှု နိုင်ငံပင်ဖြစ်ငြားသော်လည်း အ ထွေထွေ တိုးတက်မှု နည်းပါးနေသည့် နိုင်ငံ မျိုးတွင် တန်းတူလုပ် ကိုင်နိုင်ခွင့် မရသေးပါ။ ရှေးရိုး စနစ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ နိုင်ငံများတွင် အမျိုးသမီး များကိုတန်း တူအခွင့်အရေး မပေးခြင်းကြောင့် ယင်းနိုင်ငံ၏ အထွေထွေ တိုးတက်မှုမှာ ရပ်တန့်နေသည်။ သို့သော် ယင်းရှေးရိုးဓလေ့သည် ယခုအ ခါ အိုင်တီ၏ စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင် ရတော့မည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့အချိန်တွင် ကွန်ပျူ တာ၊ ဖုန်း၊ ကားတို့ဖြင့်သာ လုပ် ကိုင်ရသည့် အလုပ်များ၊ ပညာကို အခြေခံရ သည့် အလုပ်အကိုင် များ ပေါများလာသဖြင့် ကျား၊ မ ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ်လည်း နည်းပါး လာသည်။ စစ် သင်္ဘောများ၊ စက်ရုံကြီးများ၊ သုတေသနစခန်းများတွင်လည်း နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ ကိုသာ ခန့်ထားသဖြင့် အမျိုးသမီးများ နေရာရစပြုလာနေပြီဖြစ်သည်။
နေသားမကျသေးသဖြင့် ကျား၊ မ တန်းတူလုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ကို လက်မခံလိုသူ အမျိုးသမီးများ ရှိနေသေးသော် လည်း ခေတ်ပြောင်းလဲမှု ရေစီး ကို ရက်ရှည် မပိတ်ဆို့ထားနိုင် ပေ။ လာမည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အ မျိုးသမီးလုပ်သားဦးရေသည် အ လုပ်အားလုံး၏ ၄၆ ဒသမ ၅ ရာ ခိုင်နှုန်းအထိ ရှိလာ မည်ဟု အမေ ရိကန်အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန က ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။ အမြန်ဆုံးနှင့် အများဆုံး တိုးများ လာသည့် အလုပ်အကိုင်စာရင်း တွင်လည်း ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ ကျွမ်းကျင်သူများက ထိပ်ဆုံးမှ ပါ ၀င်နေပြီး ၀င်ငွေတွင်လည်း ယင်း အလုပ်က အများဆုံးဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းကဏ္ဍတွင် ကျား၊ မ ခွဲခြားခြင်းမရှိသဖြင့် ကျွမ်းကျင် သူ အမျိုးသမီးများက တန်းတူ နေ ရာရလာမည်ဖြစ်ရာ လာမည့် နှစ် များတွင် ထိပ်ပိုင်းနှင့် အလယ်အ လတ်အဆင့်ရှိ အလုပ်အကိုင် များတွင် အမျိုးသမီးဦးရေ ပိုများ လာဖွယ်ရှိသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် ဖိနှိပ် ခံလာရသော အမျိုးသမီးထုအ တွက် အိုင်တီက တန်းတူအခွင့် အရေး ဖန်တီးပေးနေသည်ဟုသာ ဆိုချင်ပါသည်။
IT သမားတယောက်သိထားဖို့လိုတဲ့ file extension လေးများ
IT သမား တယောက်.... ဖြစ်လာပြီဆိုရင်... File တွေနဲ့ ထိတွေ့ရပြီဗျာ...
ဒီအခါမှာတော့... .wav ဆိုရင် Wave File, .mp3 ဆိုရင် MP3 File, .doc ဆိုရင် Word File, .xls ဆိုရင်... Excel File...စသည်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်... ပြီးတော့ ဒီလို File အမျိုးအစားတွေကို မည်သည့် Application ... Programs... Software နဲ့ ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာကို တော့ တော်တော်များများသိကြပါတယ်...
ဒါပေမယ့်ဗျာ...တချို့ ကျွန်တော်တို့ မသိသေးတဲ့ File extension တွေ မှ အများကြီးပါပဲ...
ဒါလေးတွေကို သိစေချင်တာနဲ့ ကျွန်တော် စုဆောင်းထားခဲ့ သမျှလေးတွေကို... A to Z ပုံစံ စုစည်းပြီးတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ File extension လေးတွေကတော့ သူတို့ ဟာ ဘယ်လို File အမျိုးအစားပါ... သူတို့ကို ဘယ်လို Application... Programs... Software တွေနဲ့ ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာလေးကို ရှင်းပြပေးထားတာပါ...
.DBK dBase databse backup / Orcad schematic capture backup file.DBM Cold Fusion template
နည်းပညာ (ကိုချင်းလေး) Black Magic မြောက်ဒဂုံသား Thiha Htike - Mobile နည်းပညာ Myint Htay Aung မှတ်စု
ဒီဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ တစ်ချို့တစ်ချို့သော ပို့စ်တွေအတွက် Credit ပေးသင့်သောနည်းပညာညီအစ်ကိုများကိုပေးပါတယ်ဗျာ......
ဘ၀ကို အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေသူ ၊ ကြိုစားချင်စိတ်...
ဘ၀ကို ဒသနဆန်ဆန် နေနိုင်ဖို့ သင်ဒါတွေဖတ်သင့်တယ် နော...
By Making Different | ယူချင်တဲ့လူများနှိပ်ရန်!
Copyright © မောင်မင်းလူကလေး(နည်းပညာ) |Created by MgminLukaLay